फूलबारी रिसोर्ट बन्द गर्ने निर्णय | eAdarsha.com
फूलबारी रिसोर्ट बन्द गर्ने निर्णय
१. पर्यटकीय नगरी पोखरामा अवस्थित पाँचतारे होटल फूलबारी रिसोर्ट भाद्र २४ गतेदेखि बन्द भएको समाचार सम्प्रेषण भएको छ। फूलबारी होटल पोखराको मात्र होइन, नेपालकै ठूलो र राम्रो होटल मानिन्छ। पोखरामा यो रिसोर्ट सञ्चालन भएपछि यस क्षेत्रमा पोखराको चिनारी थप भएको अनुभव गरिएको हो।
२. यस्तो महत्वपूर्ण होटल बन्द हुनु आफैमा दुःखको कुरा हो। सो होटल बन्द भएको समाचारले यस क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश जाने अनुमान गरिएको छ। यत्ति ठूलो र राम्रो होटल किन बन्द भयो कसरी बन्द भयो भन्ने प्रश्न जताततै उठ्ने गरेको छ। पर्यटन प्रबर्द्धनको दिशामा अघि बढिरहेको पोखरामा यसले नकारात्मक प्रभाव पार्ने अनुमान पनि गरिएको छ।
३. फूलबारी रिसोर्टको यो विशेषता रहेको छ कि त्यहाँ भित्र पस्दा नेपालीपन राम्ररी झल्किन्छ। रिसोर्टको वरिपरिको वातावरण स्वच्छ, शान्त र हराभरा छ। रिसोर्टबाट माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण लगायतका धेरै हिमश्रृङ्खलाहरु नजिकैबाट अवलोकन गर्न सकिन्छ। रिसोर्टमा बसेका पाहुनाहरु फेरि एक पटक आएर यही बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने अभिव्यक्ति दिन्छन्। थोरै समयमा नै यसले राम्रो “गुड विल” कमाएको छ।
४. तर फूलबारी रिसोर्ट यस्तो बेला सञ्चालनमा आयो जुन बेला नेपालमा माओवादी जनयुद्ध चर्किएको थियो। त्यो जनयुद्धले पहिलेदेखि चालु धेरै राम्रा राम्रा होटलहरु, उद्योगहरु बन्द भएका थिए। त्यसबेला बन्द हड्ताल व्यापक रुपले हुने गर्दथ्यो। चन्दा आतङ्कबाट सबै पीडित थिए। मजदूर आन्दोलनले चरम रुप धारण गरेको थियो।
५. शान्ति सुरक्षाको ग्यारेण्टी थिएन। पर्यटकहरु एक ठाउँबाट अको ठाउँमा भनेको बेला जान सक्दैनथे। पर्यटकहरुको संख्या अत्यधिक मात्रामा घटेको थियो। पर्यटन व्यवसायका लागि त्यो अवस्था एक किसिमले अन्धकार युग नै थियो। कतिपय होटलहरुले होटल भाडा र बिजुलीको महसुल तिर्न नसकेर होटल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था थियो।
६. त्यस्तो कहाली लाग्दो अवस्थामा फूलबारी रिसोर्ट निर्माण भएको थियो। राम्ररी सञ्चालनका लागि त्यसले अन्य देशका नाम चलेका होटलहरुसँग सहकार्य गरेर सञ्चालनको प्रयास पनि गरको होे। त्यसको त्यो प्रयास पनि सफल भएन। प्रयोग र परीक्षण गर्दै धेरै समय व्यतीत भयो,।
७.पछि स्थितिमा सुधार आयो, तैपनि मजदूर आन्दोलनको चपेटाबाट उम्कन त्यसलाई कठिन भयो। महिनौँ दिनसम्म बन्द अवस्थामा राख्नुपर्‍यो। होटल व्यवस्थापनले मजदूरहरुको माग अनुसार सबै तलब भत्ता चुक्ता गर्दै जाने तर होटल सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको छ। त्यो निर्णय गर्नु त्यसको आन्तरिक अधिकारको कुरा हो। केही वर्ष पहिले होटल क्रिष्टल पनि त्यसै गरी बन्द भएको थियो। यस्तो प्रवृत्तिले यस क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश जान सक्ने भएकोले सम्बन्धित सबै पक्षले यसमा सोच्नु आवश्यक देखिन्छ।